Ogaden News Agency (ONA) – Markuu Been Alifay TV-gii Ugu Horeeyay ee Noqday Caalami Mala Rumaysan Karaa .. Daawo labada filim ee la jilayo
Markuu Been Alifay TV-gii Ugu Horeeyay ee Noqday Caalami Mala Rumaysan Karaa .. Daawo labada filim ee la jilayo
Posted by ONA Admin	/ December 4, 2014
Dagaalkii 1aad ee ka qarxay Khaliijka ee Ciraaq lagaga saarayay dalkay qabsadeen ee Kuwait waxaa kusoo caan baxay TV-ga caalamiga noqday ee CNN. Ka dib markuu caalamka usoo bandhigay dagaalaka siduu usocdo oo –Live-ah. dhacdadan ayaa ahayd markii ugu horeysay oo caalamka dacaladiisa lagala daawado dagaalka siduu u dhacayo iyadoo wariyayaasha CNN ay wada joogeen sida la rumaysnaa goobaha laga hagayay dagaalka iyo goobta uu dagaalka ka socdo.
Gulufkaa oo loo bixiyay Duufaantii Saxaraha –Operation Desert Storm-, ayaa lagu qaaday ciidankii Ciraaq ee fadhiyay Kuwait, waxaana markii ugu horeysay caalamka si Live-ah loo daawanayay sawaariikhda iyo dayaaradaha Mareykanka siday u galayaan ciidamadii Ciraaq. Dadka qaar ayaaba ku tilmaamay inuu ahaa dagaal lagu xayaysiinayo hubka iyo ciidanka Mareykanka, iyadoo waagaa ay ahayd waqtigii uu jabay xoogii kasoo horejeeday ee Soviet-ka ama Warso. Maxaa soo kordhay hadaba?
Waxaa dhaqan u ah ree Galbeedka in 20-30 sano wixii gaadha ee sir ahayd lasoo qufo. Hadaba sirta lasoo saaray ayaa waxaa ka mid ahayd siyaabaha ay wariyayaashii CNN iyagoo dhex jooga Studio-gooda Mareykanka ay u alfiayeen inay joogaan goobaha dagaalka oo midba midka kale ugu gudbinayay warka inuu ka warbixiyo goobta uu joogo. Sida sawaariikhda Scud-ka ee ciidanka Ciraaq uusoo tuurayay loo alifayay in lagusoo riday sawaariikhdii Mareykanka ay u qaybiyeen Khaliijka si looga gado inay ka difaacayaan sawaariikhda Ciraaq iyo suntan ay soo tuuri doonaan.
Halkan Ka Daawo, ka dibna;
Waxaa dad badan oon xog-ogaal u ahayn siyaabaha ay Itobiya ula dagaalamayso shacabkeena iyo halganka gudaha ka socda ka dhaadhacday beenta laga soo daayo TV-ga ay ka samaysteen Jigjiga. Waxaad arkaysaa qaar kugula doodaya waxaaban aragnaa Cabdi Iley oo dhex socda miyiga oo isagoo lugaynaya isga dhex gooshaya. Markaad ku tidhaahdo waa alifaad waxan ood waliba uso bandhigto sida loo alifo wararkaa iyo meelaha la lugaysiiyo Cabdi Iley iyo siyaabaha loo qaadayo filimka, waxaad arkaysaa inay adagtahay in lagaa rumaysto. Inkastoo wax badan uu ka badalay fahamka shacabkeena, Filimadii uu keenay mudane Cabdulaahi Xuseen ee caalamka laga daawaday sida Itobiya u alftay qabashadii labadii awriye ee u dhashay dalka Sweden, kadibna ay maxkamadda ugu soo saareen beentii ay iyagu alfieen.
Waxaa hirgashay odhaahda ah Sawirka been ma-sheego, hasa ahaatee midaasi waxay sax ahayd waayadii hore ee tiknoolojiyada ay joogtay heerka ah in aan sawirka laga been-sheegsiinin. Hasa ahaatee casrigan waxaa hubaal ah inuu yahay midkuu Rasuulka CS noo sii sheegay markuu yidhi; Waxaa iman doona waqti midka beenta shaaga la rumaysto, oo midka runta sheegaya la beenaysto.
Itobiya dagaal ayay kula jirtaa shacabkeena iyo hadafka aan leenahay ee ah madax-banaanida dalkeena. Dacaayad iyo been inay nugula dagaalanto waa qayb ka mid ah dagaalka, hasa ahaatee in aan rumaysano beentaa iyo dacaayadaa ayaan meesha qabanin. Wayse dhici kartaa sida caalamka ay CNN uga gadeen beentii aad soo daawatay.